‘KGF CHAPTER 2’ ले ल्यायो बक्स अफिसमा सुनामी
April 15, 2022 Karan SahLeaveaComment on ‘KGF CHAPTER 2’ ले ल्यायो बक्स अफिसमा सुनामी
फिल्म ‘केजीएफ २’ ले बक्स अफिसमा अनुमान गरेजस्तै सुनामी ल्याउन सफल भएको छ । प्रशान्त नील निर्देशित फिल्मले पहिलो दिनमै हिन्दी फिल्मको अहिलेसम्मकै धेरै कमाउने रेकर्ड ब्रेक गरेको मात्र होइन, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान लगायत ‘बहुबली’, ‘बाहुबली २’ को रेकर्ड ब्रेक गर्दै ‘आरआरआर’को कलेक्सन पार गरेको छ । ‘आआआर’ करिब ५५० करोड (भारु) […]
निरहुवा र अमरपालीले गरे नेपाली परम्पराअनुसार विवाह !
April 7, 2022 Karan SahLeaveaComment on निरहुवा र अमरपालीले गरे नेपाली परम्पराअनुसार विवाह !
काठमाडौं । अहिले काठमाडौंमा भोजपुरी फिल्म ‘निरहुवा हाजिर हो’को छायांकन भइरहेको छ । फिल्ममा भोजपुरी स्टार निरहुवा र अमरपालीको मुख्य भूमिका छ । बिहीबार जोरपाटीमा फिल्मको छायांकन भएको छ, जहाँ निरहुवा र अमरपालीले नेपाली परम्परा र भेषभूषामा विवाह गरे । सुटिङ सेटबाट सार्वजनिक भएको तस्वीरमा दुवै कलाकार ‘वरवधु’ लुक्समा देखिन्छन् ।२२ दिनको सेड्युल रहेको फिल्मको […]
August 16, 2021 Karan SahLeaveaComment on पवनदीपले जिते ‘इन्डियन आइडल’
भारतीय टेलिभिजनको चर्चित रियालिटी शो ‘इन्डियन आइडल–१२’ पवनदीप राजनले जितेका छन् । इन्डियन आइडल बिजेता पवनदीपले ट्रफी, २५ लाख भारतीय रुपियाँसँगै लक्जरी कार समेत जितेका छन् । यसैगरी, दोस्रो स्थानको ट्रफी अरुणिता कांजीलालले हात पारिन् भने तेस्रो स्थानको ट्रफी सायली कांबलेले जितेका छन् । यस्तै, चौंथो स्थानमा मोहम्मद दानिश, पाँचौँ स्थानमा निहाल र शनमुखाप्रिया सबैभन्दा […]
सोनुको पूजा !
July 9, 2021 Karan SahLeaveaComment on सोनुको पूजा !
मुम्बई : भारतको नेल्लोरका स्थानीयले सोनु सुदलाई पूजा गरेका छन्। बलिउडका अब्बल कलाकार सुदले नेल्लोरमा अक्सिजन प्लान्ट बनाएका कारण उनलाई भगवान्को जस्तै गरी पूजा गरेका हुन्। कोरोना कालमा उनले गरेको सहयोगको जताततै चर्चा चलिरहेको छ। आन्ध्र प्रदेशको नेल्लोरमा पहिलो अक्सिजन प्लान्ट लगाएर उनले जनमानसमा पपुलर भएका छन्। सिलिन्डरले भरिएका ट्रकहरूमा सुदको फोटो टाँसिएको थियो। उनको […]
July 6, 2021 July 6, 2021 Karan SahLeaveaComment on अक्षय कुमारको गीत ‘फिलहाल २ मोहब्बत’ रिलिज
अभिनेता अक्षय कुमारको बहुप्रतिक्षित गीत ‘फिलहाल २ मोहब्बत’ रिलिज भएको छ । गीतमा अक्षयकुमार र नूपुर शेननको केमिस्ट्री समेटिएको छ । मन छुने यो गीतले सामाजिक संजालमा प्रशंसा समेत पाएको छ । गीतको पहिलो सिक्वेल ‘फिलहाल’ २०१९ मा रिलिज भएको थियो । गीतले कयौ रेकर्ड समेत बनाएको छ । हालै युट्युवमा गीतले एक बिलियन भ्युज […]
July 5, 2021 Karan SahLeaveaComment on पुरुषहरूले गुगलमा के–के खोज्छन् ? पत्ता लाग्यो अनौठो तथ्य
सूचना प्रविधिको यो युगमा मानिसहरुका लागि गुगल दैनिकी जस्तै बनेको छ । स साना जानकारीहरुका लागि समेत हामीहरु गुगलमा निर्भर भएका छौं । कसैले केही कुरा सोध्यो भने त्यसको जवाफ दिनुअघि हामी गुगलमा सर्च गर्न थाल्दछौं । पुरुषहरुको स्वास्थ्यका विषयमा अनलाइन परामर्श दिने वेबसाइट frommars.comले गरेको एक अध्ययनमा गुगल सर्चकै माध्यमबाट पुरुषहरुको मनको कुरा जान्ने […]